Tafakatra 8000Ar mantsy ny litatra, raha ny vaovao avy any an-toerana. Tsy ny lasantsy no tsy misy fa ny tahiry ao amin'ny "Station" ihany no ritra, satria miparitaka amin'ny mpitsinjara ny solika. Ny famenoana zerikana no vaindohan-draharaha eny amin'ny toby mpaninjara solika ka sahirana ny fiara. Lasa feno mpivarotra lasantsy maka tombony avokoa eny anelanelan-trano rehetra eny ka samy manao izay saim-pantany ny mpivarotra antsinjarany. Nanomboka teo amin'ny 7.000Ar ny lasantsy io marainan'ny ny talata 16 jolay, ary niakatra 8.000 Ar omaly tolakandro ihany. Ny fiarakaretsaka na “taxi-ville” nampakatra ny saran-dalana avo roa heny ka lasa 2000Ar raha 1000Ar teo aloha. Mikorontana tanteraka, araka izany, ny fiainan'ny mponina, ary voatery nametrahana polisy eny amin'ny tobin-tsolika na tsy mbola misy solika aza, mba hisorohana ny loza.